UCinzia Bolognesi udibanisa ubugcisa kunye nokufota ukwenza iifoto ezintle kunye ne-iPhone yakhe | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UCinzia bolognesi, umfoti onetalente kunye nomzobi ovela e-Itali, okwaziyo ukudubula iindawo ezintle ezintle, enze imifanekiso eyahlukileyo ebomini kwaye adibanise imifanekiso yakhe nezinto zemihla ngemihla ezinje ukutya, ikofu, iintyatyambo kunye namagqabi. Kule nqaku, uya kufunda ngakumbi ngoCinzia, kunye nendlela ayidibanisa ngayo imisebenzi yakhe yobugcisa kunye neefoto ukwenza le mifanekiso mihle yokucinga. UCinzia Bolognesi wazalelwa eFerrara, e-Itali, kodwa uhlala e-Bologna iminyaka eli-15. Waphumelela kwi Isikolo sobugcisa obuhle, kwaye uxela ukuba umzekeliso ngumnqweno wakhe kwaye ngoku ngumsebenzi wakhe. Wabuphucula ubuchule bakhe kubuchwephesha umzobo wedijithali, kwaye oku kuye kwamvumela ukuba akhule njengomyili wemizobo kunye nomzobi wedijithali.
UCinzia bolognesi Sele eneminyaka eli-15 yamava kunxibelelwano olubonakalayo, kwaye kunjalo ngokukodwa kwi-graphic design, uphawu kunye noyilo olutsha lweendaba.
Uqale nini ukusebenzisa Instagram wathatha yonke into, yena Wayengenalo nofifi lokudibanisa ukuthanda kwakhe kolu hlobo lutsha lophakathi, njengoko esitsho.
Amava akho obuchule kubandakanya uyilo lwendibaniselwano yesazisi esikhulu, uphawu lwentengiso kunye logos kuzo zonke iintlobo zoyilo. Emva koko waqala ukufota eminye imizobo, kodwa isiphumo khange imonelise tu. Uhambo lwakho khange iqale kakuhle, njengokuba ebeka. Fumana inkuthazo kwizinto ezincinci kubomi bemihla ngemihla, kwaye uzitshintshe ezo zinto zibe ngamabali.
Ndiqale ukuyenzela unyana wam kule ndlela. Kwinkqubo yam yekofu engacwangciswanga ngenye intsasa ngexesha elithile elidlulileyo bendisitya isidlo sakusasa kwitreyi emnyama endihlala ndiyisebenzisa emsebenzini. Ndabona ishiti elinamaqebengwane endandithatha kuwo, ndaqala ukuzoba amanye amabali ndingazi. Ngaphandle kokuba ngumzobi, ndisebenze iminyaka emininzi kwicandelo lezonxibelelwano, ngakumbi ishishini lokutya, yiyo loo nto iifoto zam ezinkulu.
Usebenze ecaleni-ngecala kunye nabafoti abaninzi kwintengiso kunye nokupakisha indalo, kwaye usebenzise le ukufotowa kubomi bemihla ngemihla. Ngokuqinisekileyo andikho kwinqanaba lobuchwephesha, kodwa ndisenomdla. Waqala ukuzoba abalinganiswa ngokuzenza sebenzisana nezinto zokwenyani kuba akayithandi indlela abafote ngayo. Izinto zazisa isimilo sakhe ebomini kwaye imizobo yakhe yatshintsha intsingiselo yezinto ngokwazo. Kungekudala waqonda ukuba angaxelela abantu amabali kunye namabali.
Xa ebuzwa eyakhe Inkqubo yoyilo Kwaye ukuba wenza imizekeliso yakhe kuqala emva koko alinge ngezikhundla kunye nezinto, okanye ukuba sele enayo into afuna ukuyenza engqondweni, phendula oku kulandelayo.
Ungatsho ukuba ndibhale zonke iincwadi entlokweni yam. Into endiyizobayo ngumzekeliso wale ngxelo ithuleyo. Ndihlala ndiyenza njalo. Ndizalise iincwadana ezipheleleyo ngamabali agqityiweyo nangaphezulu. Umfanekiso oza kuqala ukuhamba kwipensile yam, emva koko ibali liyaqhubeka kwi-inki yaseIndiya, kwaye liphela ngombala. Ngalo mzuzu apho ibali liqala ukubaliswa ngamagama.
Le nkqubo yokubalisa yatshintsha xa wayeqala ukusebenzisa i-Instagram kunye nokufota okufakwe ngaphakathi kwindalo yakhe. Kakhulu kangakanani Ndizamile ukufota, ngakumbi ndaziva ndifuna ukuyisebenzisa kwilizwe lam elikhanyiselweyo.
Xa ubuzwa ukukhanya, kubaluleke kakhulu, phendula oku kulandelayo.
Ndihlala ndidubula kufutshane nefestile evulekileyo. Ndikuthanda ukukhanya kwendalo ngcono kunokukhanya okungeyonyani. Ukuba ndidubula kwiindawo eziqhelekileyo, ndihlala ndidubula ngexesha elinye losuku xa ndisazi ukuba izithunzi ziya kuthambeka. Ndiyakuthanda ukuthatha iifoto zomhlaba, ngakumbi xa ndisiya emsebenzini okanye kwiiholide. Kwixesha elidlulileyo ndithathe iifoto ezininzi zeenduli ezikufutshane nasekhaya.
Usebenzisa kuye iPhone isicelo 'Ikhamera yeCortex', ngokukodwa ukubonakaliswa okude okanye ukuba ukukhanya kwindawo kuphantsi ngakumbi. Sebenzisa kwakhona VSCO , kwaye uthandana ngokupheleleyo Ukuhlutha, ezi zimbini zokugqibela ziphelele mahala. Ekuthandeni kwakhe ngamanye amaxesha usebenzisa ii-tripods ze-iPhone, kodwa kunqabile kakhulu njengoko evuma. Ndiyathemba ukuba uyalithanda inqaku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » UCinzia Bolognesi udibanisa ubugcisa kunye nokufota ukwenza iifoto ezintle kunye ne-iPhone yakhe